Nottingham Road, iNingizimu Afrika
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Tammy
Ibekwe eLovely Village of Nottingham Road yiCaliburn Cottage, eyakhiwe kusukela ku-Beautiful Riverstone kanye neSiberian larch Timber inamagumbi okulala amabili, igumbi lokugezela elibili, iLounge/Igumbi lokudlela kanye nekhishi elivulekile uhlelo. IneVeranda emboziwe ehlanganisa indawo yeBraai/Barbeque kanye neCarport emboziwe.
I-Cottage isendaweni yayo endaweni evikelekile yaseBoddington Estate. Indawo yokuhlala enepulani evulekile inetafula legumbi lokudlela namabhentshi kanye nendawo yokuphumula ethokomele. Ikhishi lihlome kahle ngohhavini wegesi/ugesi nesitofu, iMicrowave, Iketela, iToaster, isiqandisi/ifriji kanye nazo zonke izitsha, izitsha namabhodwe namapani ozowadinga.
Womabili Amakamelo okulala anemibhede emibili engashintshwa ibe Amakhosi uma imibhangqwana ibhukha ukuze ihlale. Igumbi lokulala elikhulu linendawo yokugezela ene-ensuite enebhavu, indishi kanye nendlu yangasese. Indlu yokugezela yesivakashi ineshawa, indishi kanye nendlu yangasese. I-Veranda inezihlalo zikamoba ezinetafula lekhofi kanye namakhushini okuhlala emabhentshini aphansi eyakhelwe odongeni futhi ujabulele ukubukwa kwasemaphandleni kuyilapho uphuza ikhofi lakho lasekuseni noma uphumule lapho kune-braai yakusihlwa/ i-barbeque.
4.94(65 okushiwo abanye)
4.94 · 65 okushiwo abanye
Ihlala ePristine Midlands Meander & 2km ukusuka enhliziyweni yoMgwaqo i-Nottingham, i-Spar, amabhange, i-The Junction Shopping Centre, i-Legendary Notties Hotel, i-Gowrie Golf club futhi eduze namanye amanzi okudoba ahamba phambili i-Wildfly okufanele inikeze. 10km ukusuka eNetherwood naseFordoun Izindawo Zomshado. Imizuzu eyi-15 ukusuka eMichael House kanye nemizuzu engama-20 ukuya endaweni yomshado yase-Orchards. I-Midlands Meander inikezela ngeqoqo lemizila yokubona indawo, ukuthenga nezindawo zokudlela ongadlela kuzo kanye nezobuciko nemisebenzi yezandla, kukhona okuthile kwawo wonke umuntu.
Sicela ungangabazi ukuxhumana nami nganoma yisiphi isikhathi nganoma imiphi imibuzo.
UTammy Ungumbungazi ovelele